Dzakanakisa 10 Nzira dzekushandisa Tekinoroji Kuvandudza Bhizinesi Rako - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Bhizinesi Njere, Bhizinesi Technology Kugadzira, Digital Nokuchinja
Nguva dzemazuva ano dzakaona kubuda uye kufarirwa kwema digital media. Chaizvoizvo, chero uye zvese zvaunoda zvinongowanikwa nyore uye izvi zvinoisa tekinoroji sechinhu chinodiwa pakuvandudza yako. bhizimisi.
Business inogona kuendeswa kune hurefu hutsva nerubatsiro rwetekinoroji uye unogona kutarisa kune ino webhusaiti inobatsira yebasa rakanakisa rekunyorera. Nekushandisa kwakanyanya uye nekuchenjera kwetekinoroji, unogona kutora yako bhizimisi kunhanho dzakasiyana-siyana nekusvika kwakafara uye mamwe mabhenefiti ehupfumi.
Kune chero bhizimisi iwe unayo, zviri nani kuve nebapiro redhijitari rakanamirwa pairi. Izvo zvichabatsira mukubatana nevanhu vazhinji uye zvine hupfumi zvakanyanya kuita kudaro.
Saka pano muchinyorwa chino, tichave tichikurukura kuti tekinoroji inogona kubatsira sei yako bhizimisi uye zvinokubata zvakanaka.
1. Kugona kubatana nevanhu
Kubatana nevanhu chero nguva pasina chero zvipingamupinyi zvenzvimbo ndeyechokwadi chinhu chakanakisa nezve tekinoroji. Iwe unonzwisisa chaizvo uye unogona kuwana mhinduro kubva kune mutengi wako, kana kuhaya vashandirwi pasina kunetseka nezvekusangana navo pachedu. Kunyanya kubatanidza isu, kunowedzera kubatsira kune yako kambani uye bhizimisi. Kuve netsamba dzakanangwa dzakagadziriswa, kune pfungwa yekusarudzika kune wese munhu uye izvi zvese zvinogoneka nekuda kwekushandiswa kwetekinoroji. Nekuuya kwehunyanzvi, kune zvakare kuwedzera kubatana uye kutumira mameseji pakati pemakambani akasiyana izvo zvinobatsira zvakaenzana kune vese vanobatanidzwa mukati.
2. Kuvandudza hunyanzvi hwakasiyana
Ne tekinoroji iwe unogona chaizvo kudzidza nekudzidzira chero chinhu uye zvese. Kana iwe uchida kudzidza kugadzira kopi yekugadzira ad, unogona kutora makirasi online uye chinangwa chinogona kuzadzikiswa. Izvi zvinobatsira chaizvo kwauri bhizimisi. Paunotanga watanga zvinogoneka kwazvo kuti ungave wakaderera mubhajeti rako uye haugone kupa vanhu vane hunyanzvi hwepamusoro bhizimisi uye chirongwa. Saka kana iwe uchiziva wega mamwe matekiniki, zvinova nyore nekutanga nhanho, uye gare gare kana mari iri kuwedzera unogona kuhaya vanhu kuti vagadzirise.
3.Kushandisa kwakanaka kwema media enhau
evanhu vezvenhau iri mumakona ese nekona panguva dzazvino. Izvi zvinogona kushandiswa zvakanaka nekambani yako. Kushambadzira kwechinyakare uye kushambadza zvakaderera zvishoma izvozvi uye nekuuya kwe digital advertising, iwe unogona kuisa pazvishambadziro zvekambani yako pane zvakasiyana evanhu vezvenhau Mapuratifomu uko kunowanikwa vateereri vako. Tsvagiridzo yakanaka yaizopa zano rekuti ipuratifomu yekushandisa uye wobva wagona kubatanidza yako yekushambadzira zano. With the evanhu vezvenhau kuve nehupfumi zvakanyanya kune hushamwari kunyangwe kune vanotanga kana diki bhizimisi vadzidzisi.
4. Kuwana vanhu vane pfungwa dzakafanana
Your bhizimisi kuve pazvido zvakanakisa zvevanhu vehunyanzvi uye izvi zvinogona kuwanikwa izvozvi pasina zvipingamupinyi zvenzvimbo yavo. Iwe unogona kuwana vanhu vane pfungwa dzakafanana kune yako bhizimisi uye nerubatsiro rwetekinoroji inogona kubatana navo kunyangwe ivo vasipo panyama newe. Izvi ndezvechokwadi kubatsira wako bhizimisi sezvo pasina chinodiwa matarenda emuno chete. Saka mabasa ari kure anogona kuwedzera pane yako bhizimisi kunyangwe ichangotanga sezvo mutoro wehupfumi wese uri mushoma.
5. Tekinoroji inogona kusimudzira kugadzirwa
Ne tekinoroji inouya ese maapplication anowanikwa nyore kwauri ayo anogona kukubatsira kutarisa zvirinani uye kuwedzera kugadzirwa kwako bhizimisi. Izvi zvinogona kukubatsira iwe kuve munzira nemazuva ekupedzisira uye kushanda mune akawanda mabasa emunyori akazvimiririra. Izvi zvakakosha zvakanyanya kana iwe uri wekutanga uye uine diki bhizimisi kuti iwe unofanirwa kuunza kune zvinozivikanwa.
6. Kuishandisa chibatiso
Tekinoroji uye kushandiswa kwayo kwakakodzera kunogona kuita semanzwiro e chibatiso enyu bhizimisi. Iko kungwara kushandisa tekinoroji kunogona kuchengetedza yako bhizimisi kubva pakutyorwa kana kubiwa. Izvi kana zvaitwa zvakanaka zvinogona kuve pfungwa huru yekuzorodza uye yako bhizimisi mwero wakareba kunyangwe mukati meidzi nguva dzakaoma. Unogona kushandisa iyi webhusaiti inobatsira basa rekushandira rakanakisa kuhaya nyanzvi dzinonyanya kugadzirisa firewall yako bhizimisi.
7. Kushandisa zvinoshandiswa zvakanaka
Zvishandiso zvetekinoroji zvakaita segore uye maficha aro anogona kushandiswa nemazvo uye anogona kubatsira yako bhizimisi zvakazara. Kunyanya kune diki bhizimisi varidzi kuvapo uye kushandiswa kwegore kwaigona kuvabatsira se backup uye kuchengeta akawanda magwaro, maPDF, mifananidzo nezvimwe zvakawanda. Tekinoroji panguva yakatarwa ine akawanda maficha uye zvishandiso zvinogona kuita nani yako online bhizimisi ambiance. Izvi zvichabatsira kambani yako uye kuwedzera ruzivo rwemutengi.
8. Vatengi masevhisi pane poindi
Nekushandisa tekinoroji, iyo mabatiro evatengi inogona kupihwa chero nguva nekuedza kushoma. Izvi zvichakukanganisa zvakanaka bhizimisi sezvo kugutsikana kwemutengi kuchawedzera pachezvayo sezvaunowanikwa kune vatengi nechero chavanoda. Izvi zvichave zvinobatsira kune kambani uye bhizimisi mukufamba kwenguva. Kuwana mhinduro kubva kune vatengi kana mazano kana akatorwa mune yakanaka pfungwa, ichave yakanaka kune iyo bhizimisi. Mutengi ndiye mutongi mubhizinesi rako uye kana iwe uchibatanidza uye nekunzwisisa zvavanenge vachifarira uye kwete, unogona kushandisa tekinoroji kugadzirisa uye kuita kuti webhusaiti ive nani kune yavo nyore uye kugadzikana.
9. Inobatsira kuronga mabasa
Bhizinesi repamhepo rine zvirongwa zvakawanda zvinofanirwa kuteverwa. Izvi ndizvo zvinosarudza kubudirira kwebhizinesi rako iwe. Kushambadzira, kutumira, kushambadza zvese zvine uye zvinofanirwa kuve nehurongwa hwakasiyana. Ne tekinoroji, unogona kushandisa mamwe maapplication anobatsira nekukuitira otomatiki mabasa aya, uye nekudaro mutoro wekungozadzisa rimwe nerimwe rebasa unongotorwa uye hauna dambudziko, uye kukonzeresa kushushikana. Kushandisa the Software iyo inogona kupa autoreply inobatsirawo nekuwanikwa kwe24/7 kwebhizinesi rako uye ichawedzera iyo yakazara mutengi ruzivo uye kugutsikana.
10. Simba rekushandisa vhidhiyo
Midhiya yekuona uye mharidzo zvinogara zvichienda kure. Iri isimba raunogona kushandisa kubatsira bhizinesi rako. Nerubatsiro rwekuona tekinoroji kuratidzira kune rako bhizinesi kunogona kupfurwa uye kuitwa kukwezva vamwe vatengi izvo zvinobatsira bhizinesi rako. Digital Marketing inoita basa rakawanda kana zvasvika kumabhizimusi madiki. Izvo zvine hupfumi, zvinoda hushoma hunyanzvi uye inivhesitimendi uye ndosaka simba revhidhiyo richida kunyatso shandiswa kune iro bhizinesi.
Saka idzi ndedzimwe nzira idzo tekinoroji inogona kubatsira uye kusimudzira bhizinesi rako. Kunyangwe iwe uine diki diki kana hofori Enterprise, kushandiswa kwetekinoroji kwakakosha zvakaenzana mukuvandudza bhizinesi. Kunzwisisa izvi nekushandisa matanho anodiwa kuchakubatsira iwe mukukohwa mabhenefiti uye kusiya vatengi vako vakaguta.
ichi inobatsira webhusaiti yeakanakisa ekushandira sevhisi inogona kukubatsira iwe kuwana mhando uye vepamusoro nyanzvi dzinogona kukubatsira iwe nedhijitari bhizinesi iwe rauri kutsvaga.
11 Mazano Ekushambadzira Ekutanga Anoshanda
Apr 18 | Digital Nokuchinja
HRMS Implementation Checklist: Zvaunofanirwa Kufunga uye Ndedzipi Dhata Inodiwa
Apr 13 | Digital Nokuchinja
Kushandura Chitoro Chako Chepamhepo: Sei SEO Rubatsiro Rukuru Mukukura
Apr 8 | Digital Nokuchinja